Telegram: Sida looga tirtiro xiriirada arjiga | Androidsis
Sida loo tirtiro xiriirada Telegram
Telegram waa codsi sii wadaya helitaanka Android. Mid ka mid ah faa'iidooyinka barnaamijka ayaa ah inaan u qaabeyn karno qaab cajiib ah, mahadsanid inaad awood u leedahay inaad isticmaasho hab mugdi ah ama a noocyo badan oo kala doorasho ah in codsigu noo ogolaado. Si ka duwan barnaamijyada kale kiiskan, waxaan ku dari karnaa dad aanan haysan xiriiradayada ku jira barnaamijka. Sidaa darteed, habka loo tirtiro way ka duwan tahay.
Marka haddii aan rabno inaan tirtirno xiriir ku jira Telegram, waxaan si toos ah ugu sameynaa arjiga. Tallaabooyinka la raacayo way fududahay xaalad kasta, sidaa darteed wax dhibaato ah kuma lahaan doontid arrintan, si aad u tirtirto xiriirka barnaamijka.
Tani waa wax aan ka sameyn karno wadahadalka tooska ah ee Telegram ama tagitaanka qaybta xiriirka. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa inaan gujino magaca qofkaas, si aad u furto daaqad lagu wada hadlo barnaamijka. Marka gudaha daaqada la dhaho, guji magaca xiriirka qofkaas.
Daaqad cusub ayaa ka furaysa shaashadda. Halkan waa inaan gujino saddexda dhibcood ee toosan, oo ku yaal qaybta midig ee sare ee shaashadda. Liiska macnaha guud ayaa markaa ka dib la soo bixi doona dhowr xulasho, meesha aan ku riixeyno ikhtiyaarka Tirtirida Xiriirka, taas oo ka mid ah kuwa ka muuqda liiskaas.
Telegram ayaa na weydiin doonta inaan xaqiijino hadaan runti dooneyno inaan tirtirno qofkaas xiriiradayada. Qaabkan, markii aan gujineyno OK, xiriiriyahan horay ayaa looga saaray liiskayaga. Markaa kuma arki doonno liiska markale. In kasta oo aan marwalba haysanno suurtagalnimada in lala xiriiro qofkan iyo iyaduba nala joog.
Haddii aad rabto inaad ka hortagto qofkan inuu kula soo xiriiro, markaa waa inaad doorataa ikhtiyaarka aad ku xannibayso. Marka Telegram wuxuu qofkaas ka hor istaagayaa inuu kuugu soo qoro fariimaha dalabka. Marka tani waa wax kuxiran xaalad kastoo shaqsiyeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo tirtiro xiriirada Telegram
Galaxy Note 10 sidoo kale ma yeelan doono booska ballaarinta microSD